विप्लव पुत्र प्रकाशसहित १५ जना चितवनबाट गिरफ्तार – On Khabar
भदौ २४/ चितवन
प्रतिवन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)का छोरा प्रकाश चन्द पक्राउ परेका छन् । उनलाई चितवन मेडिकल कलेजबाट पक्राउ गरिएको ।चितवन मेडिकल कलेजले अबैध असुलेको शुल्कको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्रहरीविच झडप भएको थियो । झडपमा केही विद्यार्थी घाइते भएका छन् । सो क्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका छोरा प्रकाश चन्द सहित १५ जना पक्राउ परेका छन् ।
चन्द चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक एवम् जनस्वास्थ्य कर्मि महासंघका महासचिव पनि हुन ।
Banner News गृहपृष्ठ समाचार
बझाङका डीएसपीले नै दिदारहेछन जुवा खेलाउन निर्देशन !
अनखबर माघ १५, बझाङ — जुवा खेलाउन निर्देशन दिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि बझाङका प्रहरी प्रमुख प्रविण धिताल विवादमा तानिएका छन् । सरुवा भएर बझाङ आएको केही हप्ता मै ८ जना जुवाडे पक्राउ गरेर चर्चामा आएका उनी सामाजिक सञ्जालमा अडियो सार्वजनिक भएपछि जुवा कै कारण विवादमा परेका हुन् । बझाङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी प्रविण धिताल । […]
उर्जामन्त्री बर्षमान पुन अवस्थ, नर्भिक अस्पतालको सिसियुमा भर्ना ।
काठमाडौ,१६ फागुन । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन अचेत भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । मन्त्री पुनलाई साँझ थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । मन्त्री पुनलाई अस्पतालको सीसीयुमा भर्ना गरिएको नर्भिक अस्पतालका प्रेस संयोजक आरपी मैनालीले बताउनुभयो । नर्भिकमा अहिले मन्त्री पुनको स्वास्थ्य जाँच र उपचारमा डा. यादव भट्टसहितका चिकित्सक जुटनु भएको छ । […]